I-Moon Hut High on the Hill with Bathtub and Fireplace - I-Airbnb
I-Moon Hut High on the Hill with Bathtub and Fireplace
Contenda, Paraná, i-Brazil
Indlu encane ibungazwe ngu-Rodrigo
U-Rodrigo Ungumbungazi ovelele
Senze iqhugwane lenyanga ngezandla zethu ezingenalutho, ezingenasici, konke kuseqophelweni eliphezulu. Ihlanganiswe nemvelo futhi inombono omangalisayo, indawo ekahle kakhulu yokubona ukuphuma kwenyanga nokushona kwelanga, ukuhlala ngokukhululekile ebhavini, kusofa noma ngaphansi kwesihlahla, inombhede olala abantu ababili nombhede wesofa, i-minibar, isitofu, ishawa kanye negesi yokugeza, izinsuku ezibandayo, inendawo yokubasa umlilo kanye nendawo yokubasa umlilo eceleni kwayo, ukuze ufike eqhugwaneni lokukhuphuka kuka-50M okungenziwa ngejubane lezinyawo zakho.
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe eyenziwe ngamapulangwe amaningi, ayinethezekile, kodwa ithokomele kakhulu, ingaphakathi kwepulazi futhi engxenyeni ephakeme kunazo zonke zomhlaba, inombono omuhle futhi ixhumana nemvelo, ibungaza abantu abangaba ngu-4 ngoba ngaphezu kombhede olala abantu ababili, inombhede owusofa, inobhavu wokugezela wabantu ababili nendawo yokubasa umlilo.
Ngaphezu kwalokho, une:
Isiqandisini esincane, isitofu esinamapuleti angu-2, uhhavini, usinki, itafula elinezihlalo ezingu-4.
Imbiza, ukuma, nezinto zokudlela.
Ishidi lombhede, umcamelo, namathawula.
Inezitebhisi zangaphakathi kanye ne-balcony okumelwe ibhekwe lapho uletha izingane.
Ukungena: Kusukela ngo-2 p.m.
Ukuphuma: Kuze kube ngu-10 a.m.
Asinikezi amalahle okushisa inyama nokudla, kodwa situsa ezinye izindawo.
Ungakhohlwa ukuletha izingubo zokulala nokuxhaphaza umzimba.
Ukuze ufike endlini eyakhiwe ngamapulangwe, kukhona ukukhuphuka okungu-50M ongakwenza kuphela ngokuhamba ngezinyawo.
Okwamanje asizamukeli izilwane ezifuywayo :/
URodrigo Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Contenda namaphethelo